မီးဖိုချောင်ထဲကချစ်ဇာတ်လမ်း – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on November 14, 2020 Author admin	Comments Off on မီးဖိုချောင်ထဲကချစ်ဇာတ်လမ်း
#အော်စာအုပ် #အောစာပေ #အပြာစာအုပ် #သိုင်းကျမ်း #ဖူးစာအုပ် #မြန်မာအောစာ
တစ်နေ့မှာတော့ ကျမရေမချိုးခင်ထမိန်ရင်လျားနဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတုန်းဗြုန်းဆိုကံချားတစ်ယောက် ရုတ်တရက်ရောက်လာပါတယ်.. ကျမနည်းနည်းလန့်သွားတယ် အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိကြပေမဲ့အိမ်ထဲမှာတစ်ယောက်ယောက်တွေ့သွားလို့မဖြစ်ဘူး. .ဟဲ့..နင်ဘာလာလုပ်တာလဲ..ကံချားကဘာမှပြန်မဖြေဘဲ..ကျမကိုဖက်လိုက်ပြီးရင်လျားထားတဲ့ထမိန်ကိုဖြေလိုက်ပြီးကျမနို့နှစ်လုံးကိုသူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ဆုပ်နယ်လိုက်ပါတယ်..အိုး..ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ.မီးဖိုခန်းထဲမကောင်းဘူး..တစ်ယောက်ယောက်ဝင်လာရင်ခက်လိမ့်မယ်..ကျမဘယ်လိုပြောလဲမရပါဘူး ကံချားရဲ့ပူနွေးတဲ့လက်ဖဝါးနဲ့ကျမရဲ့နို့သီးနှစ်လုံးကိုပွတ်သပ်နယ်ဖတ်နေတာကြောင့် ကျမဟာရှိန်းကနဲဖိန်းကနဲ ဖြစ်လာပြီးကာမစိတ်တွေဝုန်းဆိုထလာပါပြီ သူဟာထမိန်ကိုခါးအထိလျှောချလိုက်ပြီးကျမနို့သီးခေါင်းတွေကိုစုတ်လိုက်ပါတယ်. .အား..ကျမရင်တွေဖိုလာပါတော့တယ်. .သူဟာကျမနို့သီးကိုစုတ်လိုက်သူ့လျှာကြမ်းကြီးနဲ့ လျှက်ပေးလိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ကျမလဲသူ့ခေါင်းကိုဖက်ထားပြီးနို့နှစ်လုံးကိုကော့ပေးလိုက်မိပါတယ် အို..ကံချားနင်ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲအဟင့်.ဟင့်..ငါမနေနိုင်တော့ဘူးနော်.ဟင်းဟင်း အဟင့် .
.သူဟာလက်တစ်ဖက်နဲ့နို့ကိုကိုင်ဆုပ်ထားရင်းနောက်တစ်ဖက်က ကျမစောက်ဖုတ်ကိုနှိက်လိုက်ပါတယ်… ကျမထမိန်ကကွင်းလုံးကျွတ်သွားပြီးကျမဟာကိုယ်တုံးလုံးပကတိဖြစ်သွားပါတော့တယ် သူဟာကျမရဲ့သန်စွမ်းမဲနက်တဲ့စောက်မွှေးတွေကိုလက်ချောင်းတွေနဲ့ကစားရင်းက စောက်ပတ်နှတ်ခမ်းကြားထဲကိုလက်ချောင်းတွေနဲ့ထိုးဆွနေပါတော့တယ်..စောက်ရည်တွေဟာဝေါကနဲထွက်လာပြီးကျမစောက်ပတ်တစ်ခုလုံးရွဲနစ်လာပါတော့တယ်ရှင် ကံချား…တံခါးပိတ်ခဲ့ရဲ့လား…စေ့ရုံဘဲစေ့ခဲ့တာ..အဲ..နင်ကတော့လေ. သွားသေချာပိတ်ပြီးကန့်လန့်ချထား.ကျမပြောလိုက်တော့ကံချားလဲ.တံခါးကိုကန်လန့်ထိုးပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ် ကျမဟာထမိန်ကိုကွင်းလုံးချွတ်ချလိုက်ပြီး..ကိုယ်တုံးလုံးအတိုင်းကံချားဆီကိုလျှောက်သွားလိုက်ပြီး…သူ့လီးကိုပုဆိုးပေါ်ကစမ်းကိုင်လိုက်ပါတယ်…အိုး..လီးကြီးကတုတ်ခဲနေတာဘဲ.ကြိုက်လိုက်တာ…ကျမဟာသူ့ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်…အိုး…သူ့လီးကြီးကစင်းပြီးတွဲလောင်းကျနေပါတယ်..ဒစ်ကလန်ထွက်နေတာကြောင့် လီးထိပ်ကြီးကဖေါင်းကားနေတာကအသဲယားစရာကြီး…ကျမဟာသူ့လီးကိုတပ်မက်စွာကိုင်ဆုပ်လိုက်ပြီး…ဖြည်းဖြည်းချင်းဂွင်းတိုက်ပေးနေပါတော့တယ်….အိုး..လီးကြီးကကိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာ..ပူနွေးပြီးမာတာတာဖြစ်နေသေးတယ်..ကျမလဲလီးကိုညှစ်ပေးလိုက်လီးထိပ်နဲ့အ ရင်းကိုထိအောင်၈ွင်းတိုက်ပေးနေတော့သူ့လီးကြီးကမာတောင်လာပါတော့တယ်…ဟော..နင့်လီးကြီး..တောင်နေပြီ…စုတ်ချင်လာပြီ..နင့်လီးကိုပေးစုတ်နော်..ကျမဘယ်လိုမှမအောင့်နိုင်တော့တာနဲ့သူ့ရှေ့မှာငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက်ပြီး ကံချားရဲ့လီးကိုပါးစပ်ထဲထိုးထည့်လိုက်ပြီးလီးစုတ်နေမိပါတော့တယ်…ကျမဟာလီးစုတ်တဲ့နေရာမှာတော့အရမ်းကျွမ်းကျင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်….ရှင်တို့ရောတစ်ချီလောက်အစုတ်ခံကြည့်ချင်လား…ကျမလျှာမှာကအက်ကွဲကြောင်းတွေပါတော့ ကျမရဲ့လျှာနဲ့လီးထိပ်ကိုရစ်ဆွဲလိုက်ရင်ဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူး…ကျမဟာသူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးကိုငုံလိုက်စုတ်လိုက်ဒစ်ကိုလျှာနဲ့ယက်ပေးလိုက်လုပ်ရင်းလက်ကလဲဂွင်းတိုက်ပေးနေပါတယ်..သူကလဲကောင်းလွန်းလို့တစ်အားအားနဲ့အော်ညည်းနေရင်းလီးကိုကျမပါးစပ်ထဲထိုးထည့်လိုက်ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်နဲ့ပါးစပ်ကိုလိုးပေးနေပါတယ်..လီးတစ်ချောင်းလုံးကိုစိတ်ရှိသလိုစုတ်လိုက်ငုံလိုက်ဒစ်ကြီးကိုလျှာနဲ့ယက်လိုက်လုပ်ပေးနေရတာလဲအရသာတစ်ခုပါဘဲရှင်..ကျမဟာရှေ့ဖက်ကလီးစုတ်ရတာအားမရဖြစ်လာပြီး..မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီးဘေးတိုက်သူ့ပေါင်ကိုခွလိုက်ပြီးသူ့လီးကိုအပေါ်စီးကစုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်..အဲဒါမှသူ့ရဲ့လီးဒစ်ကြီးရဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုထိထိမိမိလျှာနဲ့ယက်ကစားနိုင်မှာမဟုတ်ပါလား…ခုမှဘဲသူ့လီးကိုငုံလိုက်တဲ့အခါမှာကျမလျှာကွဲကြီးနဲ့ ဒစ်ကြီးကိုပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီးယက်ပေးလို့ရတော့တယ်…လီးကိုငုံရင်းဒစ်ကိုလျှာနဲ့ဖိကပ်ထားပြီးပါးစပ်ထဲစုတ်ထားရင်းအရင်းကိုမိအောင်စုတ်လိုက်ထိပ်ကိုရောက်အောင်ဆွဲပြီးစုတ်လိုက်လုပ်ပေးနေတော့ ကံချားတစ်ယောက်စိတ်တွေအရမ်းထလာပြီးကျမစောက်ပတ်ထဲကိုလက်နဲ့ထိုးထည့်နေပါတော့တယ်..ကျမလဲသူ့လက်ဝင်သာအောင်ပေါင်ကိုကားပြီးစောက်ပတ်နှတ်ခမ်းသားကိုဖြဲပေးလိုက်ပါတယ်.ကံချားဟာကျမစောက်ပတ်ကြီးကိုလက်နှစ်ချောင်းပူးပြီးထိုးနေပါတယ်..ကောင်းလိုက်တာ..စောက်ခေါင်းထဲကိုလက်နှစ်ချောင်းနဲ့ကလီနေတော့ကျမလဲဘယ်နေနိုင်တော့မှာလဲ…ဒါနဲ့ကျမလဲ.ကံချား..ငါမနေနိုင်တော့ဘူး..အလိုးခံချင်တယ်..လိုးပေး..ငါ့စောက်ပတ်ကိုအရင်မှုတ်ပြီးလိုးပေးတော့..နင့်လီးကြီးနဲ့ငါ့စောက်ပတ်ကိုလိုးပေးတော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်..ကံချားဟာကျမကိုမတ်တတ်ရပ်ခိုင်းလိုက်ပြီးခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုခုံပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပြီးကျမပေါင်ကြားထဲထိုင်ချလိုက်ပြီးခေါင်းကိုမော့ပြီးကျမစောက်ပတ်ကိုလက်နဲ့ဖြဲလိုက်ပြီးစောက်ခေါင်းအဝကနေစောက်စိရှည်ရှည်တုတ်တုတ်ကြီးအထိသူ့လျှာကြီးနဲ့သိမ်းယက်ပါတော့တယ်..အား..အမလေး..ကောင်းလှချည်လားကံချားရဲ့ယက်ပေး..စောက်စိကိုယက်ပေးစမ်း..အေး.ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်..အဲဒီအတိုင်းယက်ပေး.
…ကျမစောက်ရည်တွေဒလဟောထွက်လာပြီးသူ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးစောက်ရည်တွေပေကျံနေပြီ… ကျမသူ့ကိုဆွဲထလိုက်ပြီး..မတ်တပ်ရပ်လျှက်ပဲ သူရဲ့လီးရှည်ရှည်တုတ်တုတ်ကြီးကိုလက်နဲ့ဆွဲလိုက်ပြီး စောက်ပတ်ကြားထဲထိုးထည့်ပေးလိုက်ပြီး.. “လိုး..လိုးတော့.” ကံချားဟာကျမလိုးခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖင်ကိုကော့ပြီးလိုးထည့်လိုက်ပါတယ်.ဒါပေမဲ့သူ့လီးဟာကျမစောက်ခေါင်းထဲမဝင်ဘဲချော်ထွက်သွားပါတယ်..အိုး…ကျမဟာဖင်ဝကိုလီးနဲ့ထိုးမိသွားတာကြောင့်လန့်ပြီးအော်လိုက်မိပါတယ်…“နင့်လီးကလည်းရှည်လိုက်တာ..ရှေ့ကလိုးတာနောက်ကဖင်ဝကိုတောင်ထိုးမိနေပြီဖင်ခံချင်စိတ်တောင်ဖြစ်လာပြီ..”..ကျမဟာသူ့လီးကိုလက်နဲ့သေချာကိုင်ပြီးစောက်ခေါင်းဝမှာတေ့ထားလိုက်ပြီးကိုယ်နဲ့အသာဖိပြီးစောက်ဖုတ်ထဲထိုးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်.မာတောင်ပြီးအကြောတွေအပြိုင်းအရိုင်းထနေတဲ့.သူ့လီးကြီးဟာကြွက်သားအတွန့်အတက်တွေနဲ့ဇောင်းထနေတဲ့ကျမစောက်ခေါင်းထဲကိုဒစ်မြုပ်ရုံမကသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ဝင်သွားပါတယ်… “ကဲ..ကိုယ်တော်လိုးပါတော့ရှင်..ရှင့်လီးကိုကျမစောက်ဖုတ်ထဲအသင့်ထိုးထည့်ပေးထားပြီးပါပြီ..စိတ်ရှိသ၍လိုးတော်မူပါတော့” ကျမဟာသူ့ကိုညုတုတုပြောရင်းအလိုးခံဖို့စိတ်ကိုအသင့်ပြင်ထားလိုက်ပါတော့တယ်..ကံချားဟာကျမခြေထောက်ကိုထိုင်ခုံပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပြီး..ဒူးနှစ်လုံးကိုအသာကွေးပြီးကျမပေါင်ကြားထဲမှာနေရာယူလိုက်ပါတယ်…သူ့လီးကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကော့ထိုးကြည့်လိုက်ပြီးမှကွေးထားတဲ့ဒူးနှစ်လုံးကိုဆန့်ထုတ်ပြီးခါးအားပါစိုက်ပြီးလီးကိုအချောင်းလိုက်ကြီးကျမစောက်ခေါင်းထဲကိုထိုးထည့်ပြီးလိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်..သူကဒူးဆန့်ပြီးခါးအားနဲ့ပေါင်းပြီးကော့လိုးလိုက်သလိုကျမကလဲ.. ဒူးကိုအသာညွှတ်ပြီးလီးကိုစောက်ခေါင်းထဲထိုးသွင်းယူလိုက်ပါတယ်..အား.ပါးပါး..လီးကြီးဟာကျမစောက်ဖုတ်ထဲကိုတစ်ဆုံးနစ်ဝင်သွားပါတော့တယ်…သူကကျမကို“ရရဲ့လားဟင်”..
ကံချားကဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲလက်တစ်ဖက်ကကျမဖင်ကိုကိုင်ဆုပ်ထားပြီးဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲကော့ပြီးကျမကိုအဆက်မပြတ်လိုးပါတော့တယ် စောက်ရည်ရွဲနေတဲ့ကျမ စောက်ပတ်နဲ့သူ့ဆီးခုံနှစ်ခုဟာကော့လိုးလိုက်တိုင်းတစ်ပြတ်ပြတ်နဲ့အသံမျိုးစုံအောင်ထွက်နေပါတော့တယ်…ကျမမတ်တပ်ကြီးအလိုးခံရတာကောင်းပေမဲ့နဲနဲကြာလာတော့ဒူးညောင်းလာတယ်..ဒါနဲ့သူ့ကိုခဏရပ်ခိုင်းလိုက် ပြီးထမိန်ကိုဖြန့်ခင်းလိုက်ပြီး..ဒူးနှစ်ဖက်ကိုမြှောက်ပြီးပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဖြဲကားထားပြီးလက်နှစ်ဖက်ကစောက်ပတ်ကိုဖြဲပေးပြီး..ကဲ..ဒီအတိုင်းဘဲအားရပါးရလိုးပေတော့..ကံချားဟာကျမစောက်ဖုတ်အုံကြီးပေါ်ခွထိုင်လိုက်ပြီးခြေဖျားနှစ်ဖက်ထောက်ပြီးထိုင်လိုက်ပြီး စောက်ခေါင်းဝကိုလီးနဲ့ကိုင်တေ့ပြီးသူ့လီးကိုကျမစောက်ခေါင်းထဲလီးတစ်ချောင်းလုံးမြုပ်ဝင်သွားအောင်လိုးထည့်ပြီးဆယ်ချက်လောက်မှန်မှန်လေးမျှင်းလိုးနေရာကဖြည်းဖြည်းချင်းအရှိန်ယူပြီး..မနားတမ်းအသာကုန်ဆောင့်လိုးပါတော့တယ်
…အား..အမလေး..ထွက်..ထွက်တော့မယ်ပြီးတော့မယ်..ခဏရပ်ထားလေ…မရတော့ဘူး..မရပ်ချင်တော့ဘူး… လိုးကောင်းလိုက်တာ..မရပ်ချင်တော့ဘူး..အပြင်ထုတ်လိုက်ရမလား. .“မထုတ်နဲ့..လိုး..ဆက်သာလိုး..ကောင်းတယ်…မရပ်နဲ့. .နင့်လရည်တွေကိုစောက်ခေါင်းထဲအကုန်ထည့်ပေး…အား…ပူကနဲဖြစ်သွားတာဘဲ ..နင့်လရည်တွေကပူလှချည်လား..”“ အောင့်ထားရတာတွေလေ..”ကံချားဟာပြောရင်းဆိုရင်းသူ့လီးကြီးကို ကျမစောက်ဖုတ်ထဲတစ်ဆုံးထည့်ထားပြီးလီးထဲကလရည်တွေကိုတစ်ဗြစ်ဗြစ်ညှစ်ထုတ်နေပါတော့တယ်. .ကျမလဲသူ့လရည်တွေကိုစောက်ခေါင်းကြွက်သားတွေနဲ့ တစ်စက်မကျန်ညှစ်ထုတ်ပြီးစောက်ခေါင်းထဲမှာစုတ်ယူထားလိုက်ပါတော့တယ်. .သူဟာကျမလည်ပင်းကိုသိုင်းဖက်ရင်းအမောဖြေနေရင်းလီးထိပ်ကိုသာအိမ်ခေါင်းနံယံနဲ့ထိုးနေရင်း… သူ့ဆီးခုံကကျမစောက်စိကိုဖိပွတ်ပေးနေတော့ကျမလဲ. .မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ..အားကနဲရှည်လျှားစွားအော်လိုက်ရင်း. .အောက်ကကော့ထိုးတွန့်လိမ်ရင်းကာမအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်…. ကျမဟာသူ့ဆံပင်လေးတွေကိုသပ်ပေးရင်းသူမျက်နှာကိုရွမ်းရွှမ်းစားစားကြည့်ရင်း .“ကဲ..စိတ်ကျေနပ်သွားပြီလား…နောက်ကိုအိမ်ထဲဇွတ်ဝင်မလိုးနဲ့နော်. .လိုးချင်လို့မနေနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်နင်ရေချိုးတဲ့အခါအချက်ပြလိုက် ..ငါကနင်ရေချိုးတိုင်းချောင်းကြည့်နေကျ..သိရဲ့လား
ဦးတိုက်မောင်းလည်း မေဦးကို သဘောကျသွားသဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် အလိုရှိတိုင်း ခေါ်ခေါ် လိုးတော့သည်။ မေဦးလည်း ဦးတိုက်မောင်း၏ တစ်လက်ကိုင် ဖြစ်နေတော့သည်…သူသူ့အား ပုံမှန် အားပေးနေသော စစ်နိုင် ဆိုသည့် သူဌေးသား တစ်ယောက် ရှိသည်။ စစ်နိုင်သည် မိဘ ချမ်းသာမှု အရှိန်ဖြင့် သုံးဖြုံးနေသော လူငယ် တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ သူသူ သီချင်း ဆိုတိုင်း ပန်းကုံးဆွတ်၊ ဆုငွေ ပေးနေကြ ဖြစ်သည်။ စစ်နိုင် သူသူ့ကို လိုးခြင်နေပြီ။ အပြင် လိုက်ရန် ဒဲ့ မေးဖူးသည်။ သူသူက ထိုသို့ လုပ် မစားဘူးဟု ငြင်းလွှတ်ခြင်း ခံရသည်။ သူသူတို့ ဆိုင်တွင် စစ်နိုင် ခေါ်၍ မလိုးဘူးသော မိန်းကလေး မရှိသလောက်ပင်။ သို့သော် မေဦးနှင့် […]
ဂွင်ဖန်သောမမ ………… ရှယ်နိပ် ဖတ်ရူ့ပါရှင့်